QM oo sheegtay in tirada dadka abaaraha ku barakacay ay labo jibaarmeen Soomaaliya | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	QM oo sheegtay in tirada dadka abaaraha ku barakacay ay labo jibaarmeen Soomaaliya
QM oo sheegtay in tirada dadka abaaraha ku barakacay ay labo jibaarmeen Soomaaliya
Tirada dadka ku barokacay abaarta hadda ka jirta Soomaaliya ayaa laba jibaarmay bishii Jannaayo iyadoo markii hore ahayd 245,000 ilaa 554,500, sida ay Qaramada Midoobay sheegtay Jimcihii.
Inta badan dadka barakacayaasha ah ayaa ka soo barakacay gobollada Galgaduud, Mudug iyo Baay, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha bini’aadantinimada ee OCHA.
Sida lagu sheegay bayaanka 4.3 milyan oo qof ayay abaartu saamaysay, kuwaas oo dalbanaya gargaar bini’aadantinimo oo joogto ah.
“Abaartu waxay sii korortay ee Soomaaliya iyadoo in ka badan 4.3 milyan oo qof ay saameeyeen, marka loo eego 3.2 milyan bishii December 2021,” ayaa lagu yiri bayaanka.
“Wax-soo-saarka dalagyada ayaa laga soo sheegay gobollada dhexe, iyadoo wax-soo-saarkii xilliga-goosadka uu ka dhacay gobollada Koonfur iyo Waqooyi-galbeed, taasoo keentay in wax-soo-saarkii deyrta saddexaad ee ugu hooseeya (inti u dhexeysa Oktoobar iyo December) laga soo bilaabo 1995-kii Koonfurta Soomaaliya,” ayaa lagu daray war-saxaafadeedka.
Sababo la xiriira saameynta isbiirsaday ee roobab xumida iyo nabad-gelyo-xumada, ayay tiri QM, ilaa 4.1 milyan oo qof ayaa u baahan gargaar cunto oo degdeg ah.
Iskahorimaadyada ku saleysan kheyraadka ee biyaha iyo daaqa, oo ay weheliyaan khataraha xadgudubyada jinsiga, ayaa sidoo kale kor u kacaya inta lagu jiro abaarta, sida ay sheegtay hay’adda gargaarka bini’aadannimo ee Qaramada Midoobay.
Abaarta ayaa sidoo kale galaaftay nolosha in ka badan nus malyuun xoolo ah, taas oo baabi’isay ilihii dhaqaalaha ee kumanaan qoys.
QM oo sheegtay in tirada dadka abaaraha ku barakacay ay labo jibaarmeen Soomaaliya was last modified: February 19th, 2022 by warsan radio
Madaxweyne Deni oo kusii jeedda degmooyin ku yaalla gobolka Berri
Madaxweynaha Galmudug Oo Kulan La Qaatay Saraakiishii Ahlusunna Ee Lagu Wareejiyay Dowladda
Dhageyso;- Fariin Ku Saabsan Xuska Maalinta Duumada Adduunka (World Malaria Day) oo Sanad walba la xuso 25 April.
Madaxweyne Waare oo ka hadlay Dil loo geestay Wasiir katirsaaa maamulkiisa amarna bixiyay